Burcad-badeed Somali ah oo lagu xukumay dalka France. – Radio Daljir
Burcad-badeed Somali ah oo lagu xukumay dalka France.
Diseembar 1, 2011 12:00 b 0
Paris, Dec 01 – dalka fransiiska 5 nin oo burcad-badeed Somali ah ayaa lagu xukumay xabsiyo udhexeeya 4 illaa 8 sano, kadib markii ay lamaane dalkaasi udhashay ka afduubteen gacanka cadmeed, nin lixaad oo isaguna kamid ahaa kooxdan ayaa isna wax danbi ah lagu waayey.
Maxkamadan oo noqonysa tii ugu horraysay oo burcad-badeeda laxiirita oo kadhacda dalka Fransiiska ayaa qaadiyada dacwada kusoo oogay burcad-badeeda Somalida ah waxay dalbadeen in raggan oo da?doodu udhaxayso 21 illaa 36 sano jir lagu xukumo xabsiyo udhexeeya 6 illaa 16 sano oo xarig ah dambiyo laxiriira afduub iyo dhac hubaysan.
Sannaddii 2008-dii ayey koxoodan burcd-badeedda ahi qabsadeen dooni ay wateen lamaanaha Jean Yves Delanne iyo xaaskiisa Bernadette kuwaasi oo labaduba kujira da?da lixdanaad waxaana ay dalbadeen 2ml oo dollar.
Ciidamada gaarka ah ee Fransiiska ayaa hawlgal ay fuliyeen waxay kusoo qabteen raggaan bucadda ah iyagoo badbaadiyey labadii lamaane waxaana hawlgalkaasi kudhintay qof looga shakisanaa in uu burcad yahay.
Maalinimadii Arbacadii ee todobaadkan ayey kooxdan burcadda-badeedda ah ee la xukumay raali galin ugudbiyeen lamaanihii ay qafaasheen iyagoo cafis waydiistay lamaanahan reer france.
“Waxaan waydiisanyaaa Mr Delanne iyo xaaskiisa in ay nacafiyeen dhibaatada aan ugaysanay” sidasi waxaa yiri Sheikh Nur Jama Mohamud oo lasiiyey fursadii ugu danbaysay oo uu kuhadlo .
“Waxaan urajaynyaa cimri dheer caafimaad waxaana rajayn in xarigga nalugu xukumayo uu noqdo mid fudud” sidaasi waxaa yiri mid kale oo budhcad badeda kmid ah Mohamed Hassan Yacub.
Maalinimadii Arbacadii lamaanihii ay burcad-badeeddu qafaasheen Bernadette iyo Delanne ayaa gacan qaaday kooxdan burcadda ah ee lagu helay dambiga burcadnimo, iyagoo usheegay in ay nasiib urajaynyaan.
?Waan ka xunahay masiibada bini?aadatinimo ee ka dhacday Bossaso? Xasan Geerash, wasiirka ganacsiga ee Puntland.
Baahin: Arbaca, Nov 30, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. R/wassaare Gaas oo dhalleeceeyey weeraro & qaraxyo lala beegsaday fariisinka ciidanka federaalka ee Villa Baydhabo, Muqdisho; 4 dhimasho ah, 8 dhaawac ah oo uu sababay qaraxa Villa Baydhabo; Gen. Dhegabadan ayaan ka waraysanay; Warbixin ku saabsan xaflad lagu soo gunaanaday colaadii Garsoor oo lagu qabtay Garowe; Madaxda & Issimada Puntland oo khudbado ka jeediyey.